Seydou Keita Oo Barcelona Ka Tagay Kadib 4 Sano Iyo 14 Koob Uu La Qaaday Mudadan Yar Ee Gaaban
Xidiga qadka dhexe ee wadanka Mali Seydou Keita ayaa isaga tagay Barcelona kadib markii uu kobab badan la qaaday kooxdsa muddo afar sanno oo uu la joogay.
“Seydou Keita ayaa shaaca ka qaaday caawa (xalay) inuusan sii wadan doonin inuu lasii joogo Barcelona aya lagu yiri war qoraal ah oo kasoo baxay Barcelona habeenkii sabtida ee axadda soo galaysay.
Qoraalka Barcelona kasoo baxay aya sidoo kale loogu mahad celiyay Seydou Keita mudda uu u ciyaarayay lana qaaday koobabka isla markaasna ay u rajeeyeen mustaqbal wanaagsan.
Ciyaaryaahnkan Seydou Keita ayaa waxaa lala xiriirinayay koox shiinees ah oo lagu magacaabo Dalian Aerbin.
Seydou Keita ayaa maray wadadii ay horey u mareen xidigaha Didier Drogba, Frederic Kanoute, Yakubu Aiyegbeni kuwaas ka ciyaaraya horyaalka China.
Xidigaan Seydou Keita oo 32 jir ah ayaa kusoo biiray Barcelona sanadki 2008 wuxuna kasoo tagay kooxda Sevilla isagoo ahaa ciyaaryaahnki ugu horeeyay ee Pep Guardiola lasoo saxiixdo markii loo magacaabay Tababare.
Inkastoo hishiiska uu kula jiro Seydou Keita kooxda Barcelona uu dhamaanayay sanadka 2014 ayaa hadane wuxuu noqday mid iska bur buray oo labada dhinac ay ku qanceen.
Pep Guardiola ayaa u adeegsan jiray ciyaryahanka reer Mali Seydou Keita badalka macquulka ah wuxuuna ka caawiyay Barcelona inay qaado 3 horyaal 2 Champions Leagues iyo koobka dalka waayihi uu la joogay.
Seydou Keita ayaa horey ugu soo ciyaaray kooxo ay kamid ahayeen Marseille, Lorient iyo Lens ka hor inta uusan u dhaqaaqin dalka Spain halkas oo uu ku biiray kooxda Sevilla.
Koobabka uu la qaaday Seydou Keita kooxda Barcelona.
· 3 x Spanish league (2009, 2010, 2011)
· 2 x Uefa Champions League (2009, 2011)
· 2 x Copa del Rey title (2009, 2012)
· 2 x Fifa Club World Cup (2009, 2011)
· 2 x Uefa Super Cup (2009, 2011)
· 3 x Spanish Super Cup (2009, 2010, 2011)
Xidiga qadka dhexe ee wadanka Mali Seydou Keita ayaa isaga tagay Barcelona kadib markii uu kobab badan la qaaday kooxdsa muddo afar sanno oo uu la joogay.“Seydou Keita ayaa shaaca ka qaaday caawa (xalay) inuusan sii wadan doonin inuu lasii joogo Barcelona aya lagu yiri war qoraal ah oo kasoo baxay Barcelona habeenkii sabtida ee axadda soo galaysay.Qoraalka Barcelona kasoo baxay aya sidoo kale loogu mahad celiyay Seydou Keita mudda uu u ciyaarayay lana qaaday koobabka isla markaasna ay u rajeeyeen mustaqbal wanaagsan.Ciyaaryaahnkan Seydou Keita ayaa waxaa lala xiriirinayay koox shiinees ah oo lagu magacaabo Dalian Aerbin.Seydou Keita ayaa maray wadadii ay horey u mareen xidigaha Didier Drogba, Frederic Kanoute, Yakubu Aiyegbeni kuwaas ka ciyaaraya horyaalka China.Xidigaan Seydou Keita oo 32 jir ah ayaa kusoo biiray Barcelona sanadki 2008 wuxuna kasoo tagay kooxda Sevilla isagoo ahaa ciyaaryaahnki ugu horeeyay ee Pep Guardiola lasoo saxiixdo markii loo magacaabay Tababare.Inkastoo hishiiska uu kula jiro Seydou Keita kooxda Barcelona uu dhamaanayay sanadka 2014 ayaa hadane wuxuu noqday mid iska bur buray oo labada dhinac ay ku qanceen. Pep Guardiola ayaa u adeegsan jiray ciyaryahanka reer Mali Seydou Keita badalka macquulka ah wuxuuna ka caawiyay Barcelona inay qaado 3 horyaal 2 Champions Leagues iyo koobka dalka waayihi uu la joogay. Seydou Keita ayaa horey ugu soo ciyaaray kooxo ay kamid ahayeen Marseille, Lorient iyo Lens ka hor inta uusan u dhaqaaqin dalka Spain halkas oo uu ku biiray kooxda Sevilla. Koobabka uu la qaaday Seydou Keita kooxda Barcelona.· 3 x Spanish league (2009, 2010, 2011)· 2 x Uefa Champions League (2009, 2011)· 2 x Copa del Rey title (2009, 2012)· 2 x Fifa Club World Cup (2009, 2011)· 2 x Uefa Super Cup (2009, 2011)· 3 x Spanish Super Cup (2009, 2010, 2011)